Zentela amabhizinisi amancane
Uhlelo intela wezwe lakithi, njenganoma iyiphi enye, kuyinto kubenzima. Futhi inqobo nje kuphela ukuqoqa imali, kodwa futhi ahlinzeke impumuzo yesikhashana izinhlangano ezincane kwezomnotho. Mshini nokuxhumana is njengoba zentela for osomabhizinisi ibhizinisi elincane ezaziwayo. Kuyini lokhu? Njengoba liye esikhishwe ngokomthetho? Kwakuzoba isikhathi eside kangakanani? Futhi ziyini izici zalo?
Yini kuyiholide intela yamabhizinisi amancane?
Yini abakubonisayo? Ngaphansi ngamaholide intela bona kunezinzuzo ezithile amabhizinisi, owawuthi akayena intela. Le ndlela yokwenza luyasetshenziswa ukusekela izinkampani ezizimele ukuthi ukhiqiza izimpahla eziningi limited.
Emithetho intela amaholide amabhizinisi amancane aye ezikhishwa federal umthetho Cha 477-FZ. Lithi kusukela 01.10.2015 futhi ngo-2020 usomabhizinisi ngamunye osanda bhalisiwe ingakwazi kubo. Kufanele wathi khona ukuthi umthetho ophathelene intela amaholide is lenziwa nsuku saziso endaweni WaseRussia. Lithi iziphathimandla zendawo zingenakukwazi khona ukungena kwabo ku insimu yalo. Uhlu izindawo kanye izinto lapho zentela ziye owethulwa ekupheleni isihloko. Imigomo yokusetshenziswa IP kanje:
1. usomabhizinisi ngamunye kufanele zibhaliswe ngokokuqala ngqá ekuphileni kwami. Kule singaphetha ngokuthi livale ibhizinisi labo, bese futhi ngeke ukuvula.
2. izinzuzo uthola ezintathu kuphela izindawo umsebenzi umkhiqizo:
Scientific. Imisebenzi okubandakanya ukuthuthukiswa entsha izakhiwo, amathuluzi noma imikhiqizo.
Komphakathi. Lokhu kuhlanganisa izinkampani ezisebenza emkhakheni womphakathi.
Ukukhiqizwa. Ngaphansi lo mugqa uthola ukuziphatha imisebenzi, okwaphumela ukuzilungisa for ukuqaliswa imikhiqizo, izinto zokusetshenziswa noma imikhiqizo Semi-siphelile.
3. usomabhizinisi ngamunye uzothola akukho ngaphansi kuka-70% imali engenayo zabo kusuka imisebenzi ukuthi ehlanganiswa iholide intela.
Ububanzi isicelo intela amaholide
Njengoba sekuphawuliwe, iholide intela yamabhizinisi amancane iqalwe kuphela ezindaweni ezintathu. Ukubeka nje ngokusobala umthetho, bababonisa Imibandela kakhulu. Unciphise wonke umsebenzi imithetho yesifunda, okuyinto ebekiwe ukuthi idatha kungaphansi lokungayikhokhi. Futhi ngokuqondene nalezi zici kuvela ukuthi practice kunomehluko obalulekile phakathi izifunda ezahlukene lapho oyithandayo intela kuncike izinhlobo ezahlukene imisebenzi yebhizinisi. Futhi zentela for osomabhizinisi ngamanye ehlukile noma kuzohluka kuncike esifundeni. Lena isici kunalokho abuhlungu lokhu kwakwenqatshelwe.
Izici okuyinto unesikhathi izinzuzo intela
Ukukala lisuka kumaphesenti angu-zero esivumelekile kusuka 2015 kuya 2020. Kodwa ambalwa lokwazi ukuthi niyaphola, kumelwe acabangele izici eziningana ewusizo:
Kepha usomabhizinisi lowo omusha abavule PI ungathola samaholide kuyinto eyodwa noma ezimbili intela nezikhathi. Ngakho-ke, kufanele wenze esiphethweni esidumazayo: igama elithi oluphathelene nokukhululwa kwabo ekukhokheni intela ayikwazi ukudlula iminyaka emibili. Kulokhu, inkathi intela akuyona njalo ulingana unyaka owodwa. Ngakho, uma ukukhululwa elanikezwa inkampani, okuyinto bhalisiwe e Mashi 2016, kuyoba isinyathelo 365 izinsuku, kuze kube sekupheleni 2016-th.
Akubalulekile nje kuphela isikhathi sokubhalisa ibhizinisi, kodwa futhi isikhathi lapho umthetho lesifunda kwavunyelwana.
Ekugcineni kuyomhambela kanjani ukusebenza iholide intela ibhizinisi elincane, ukuxazulula neziphathimandla zendawo, okuyinto anqunyelwe ibanga elithile. Okungenani - yenkathi eyodwa, esiphezulu - amabili.
Yikuphi kakade usebenze zentela ibhizinisi?
Manje thina uqhubekela kumnandi. Umthetho uqobo akusho ukwethula zentela ibhizinisi elincane WaseRussia. Ngakho-ke, kuphela izifunda kusebenze kubo. Okwamanje zingabantu endaweni:
Khanty-Mansiysk Autonomous avtonomnyy.
Njengoba ubona, hhayi kakhulu obukhulu. Kwezinye izifunda, iziphakamiso ukwemukelwa yomthetho. Ziyakwazi:
Republic of Bashkortostan;
Yamalo-Nenets Autonomous District;
I laseStavropol Territory;
Sekuvele kukhona isimo kangcono, kodwa kukhona abanye umehluko by esifundeni. Ngakho, e-Territory Primorsky kubhekwa kuphela "intela Esenziwe Lula," kodwa alikho igama elithi ngezinzuzo patent. Ngesikhathi esifanayo, kukhona kuphela ngezigaba ejwayelekile imisebenzi zingena ngaphansi komthetho ukuthi. Ngakho-ke kungenzeka ukuqhathanisa ukuze ubone ukuthi itholakala eMoscow. Kulomuzi for osomabhizinisi usethe ubuncane imingcele, esiphezulu imbozwe izinhlobo ezahlukene imisebenzi. Kule ngombono, zentela for osomabhizinisi ngabanye eMoscow Ubonakala ekhangayo.
Futhi kwenzekani kule ndawo lomakhelwane noma emazweni angaphandle? Kufanele kuthiwe Russian Federation usanda kwethula lento omunye umqondo yakamuva intela amaholide. Ngokwesibonelo, e-Ukraine iminyaka eminingi izinzuzo ezibanzi emkhakheni kolwazi nobuchwepheshe. Futhi emazweni anjenge Norway, i-United States, eFrance, eJalimane nakwamanye, leli washi isivele iyingxenye ebalulekile ukusebenza umnotho, ngayo nefunda ngayo izimo sokuthuthukiswa emikhakheni ethile. Kuyasiza ukuqinisekisa kalula zokwenza ibhizinisi uma kwenzeka esibucayi, kanye sikhuthaze labantu ukuthola IP entsha (futhi kamuva, mhlawumbe, futhi izinhlangano ezinkulu ezifana izinkampani, amabhizinisi noma izinkampani). Ngakho-ke akumangalisi ukubona ukuthi ukusetshenziswa intela amaholide kungaba sonke isikhathi. Ngesikhathi esifanayo, kwezinye izindawo umnotho futhi uhulumeni uxhaso lithwalwe ngazo (sokunconywa ukutadisha Ezolimo eFrance). Kodwa thina, uma kucatshangelwa isimo somnotho esinzima, ngaphambi kwalokhu kude.
Njengoba ubona, intela credits - ithuluzi eliwusizo kakhulu ukuthi isiqala ukuba usetshenziswe ezweni lethu. Ngakho-ke, uma kukhona isifiso sokwenza into yabo ngezinga elincane, kubalulekile ukutadisha izici zebhizinisi ngamanye kabanzi, bese embili umgomo walo. Ngempela, unikezwa zigcine wake ngincipha isimo, kunengqondo ukuphetha ngokuthi lesi senzo ophanayo singacinywa eminyakeni embalwa.
I-exemption ku-motor intela imoto imindeni emikhulu. Yini intela izinzuzo kufanele imindeni emikhulu
Sikhokha intela: Isikhathi intela njengoba isici okuphoqelekile okwenziwa ezikhungweni intela
Tincenye intela ye abantu zemvelo nezinhlangano ezingokomthetho
Yokudonsa intela ku ukudayiswa amafulethi kanye nezinye ingcebo
Ubani ushwele wentela imoto (2014)?
Izimbangela zesifo ureaplasma ezingabantu
Amatshe okuhlobisa elingaphakathi - isixazululo fresh futhi yasekuqaleni
Yokudayisa - lena Injongo eyinhloko ye-ibhizinisi
Izimoto zaseSoviet. Izimoto "Moskvich", "Volga", "Seagull", "ukunqoba"
The best uchungechunge post-ezibhubhisayo. Uhlu uchungechunge TV ngezwe post-ezibhubhisayo
Yiziphi simulators yabezindaba besisu
Kanjani ukubala intela imoto?
Kangakanani upokisi kuthiwa omnene?
Isifo Cerebrovascular kanye nezimpawu zako ezisemqoka
"Umakoti", AP LaseChekhov: isifinyezo. "Umlobokazi '- indaba ngepilo izinqumo
Iwan Rheon: Filmography, izithombe, kanye nempilo yakho
Ukwakhiwa kwebhuku lokugeza